विश्वभरका कलाकारहरू स्ट्यान लीलाई श्रद्धांजलि दिन्छन् क्रिएटिव अनलाइन
हिजो भेट्न धेरै दुःखद दिन थियो स्टान लीको बितेको खबर छ। कमिक लिजेन्डले हामीलाई विशाल र विशाल विरासतको साथ छोड्छ जसको विशाल सुपरहाइरोहरू जस्तै फन्टेस्टिक,, स्पाइडरम्यान, हल्क र अन्य धेरै।
चरित्रहरूको एक श्रृंखला जसले ठूलो बक्स अफिस हिटको साथ हालका बर्षहरूमा ठूलो स्क्रिनमा यो बनाएको छ। अब तिनीहरू छन् एक श्रद्धांजलि गरेका विभिन्न कलाकारहरू स्टान ली लाई महान स्टान ली र त्यो महान् चमत्कार सम्झना गर्न।
यो हिजो मात्र 95 of वर्षको उमेरमा स्ट्यान लीले हामीलाई छोडेर गयो। सम्पादक, लेखक र केहि पात्रहरूको सह-निर्माता सबै समयका सर्वश्रेष्ठ चिनिएका कमिक किताबहरू। एक्स-मेन, आइरन म्यान वा स्पाइडरम्यान ती सुपरहिरोहरू हुन् जसले पप संस्कृतिमा सदाको लागि पार गर्यो।
तपाईलाई धन्यबाद व्यक्तित्व र उत्साह कमिकको माध्यमबाट, ली उद्योग को सब भन्दा प्रिय व्यक्तित्व को एक बन्न पुगे। हामीले उहाँलाई मार्वल चलचित्रहरूमा असंख्य क्याओसमा देख्यौं जुन उहाँ सिम्पसन वा बिग बै Bang थियरी श्रृंखला मार्फत महान शेल्डन कूपरको साथ हुनुहुन्छ।
हिजो हजारौं प्रशंसक र कार्टूनिस्टहरूको हृदय बेहोश स्टान लीको बितेको दुःखद समाचारमा। र त्यहाँ धेरै कार्टुनिष्टहरू छन् जसले सम्मान गरेका छन्, जस्तै यो बहुमुखी डेभिड बोवीको साथ भयो.
ह्याशट्यागहरू हुन् #StanLee, #StanLeeRIP र #StanLeeForever जुन मार्फत तपाईं शब्द र संवेदनाहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ, साथै रेखाचित्रहरू, ग्रहको धेरै मानिसहरू।
छोरा अभिनेता, लेखक र सम्पादकहरू ती व्यक्ति जसले आफ्नो शोकको सन्देश Stan Lee भन्दा बढिमा पठाएका छन्। चित्रहरूको श्रृंखला जुन उनले हामीलाई छोडे र त्यो लामो समयसम्म रहनेछ भन्ने महान् विरासतलाई श्रद्धांजलि दिन्छ।
उहाँ आफैले धेरै पटक भने जस्तो: एक्सेल्सियर!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » कलाकारहरू स्टान लीलाई श्रद्धांजलि दिन्छन् जसले हामीलाई हिजो छोड्नुभयो